Tari-dalana Toriteny Alahady 04 Septambra 2016 (Alahady faha-15 manaraka ny Alahadin’ny Trinité) – Zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy (ZFLM)
Tari-dalana Toriteny Alahady 04 Septambra 2016 (Alahady faha-15 manaraka ny Alahadin’ny Trinité)
Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompontsika. Indro atolotra anareo indray ny tari-dalana tsotsotra moba ny texte izay hotoriana manerana ny sahan’ny FLM amin’ny Alahady faha 04 Septambra 2016 (XV Man Trinite) ho avy izao. Mirary soa indrindra tompoko.
“Aza manahy ny amin’ny Ainareo”
Nisy lohahevitra iray izay napetraky ny namana tao amin’ny fiseraserana ara-tsosialy anankiray manao hoe “Tsy ny fiainana no lafo fa ny mpanjifa ny fiainana no vitsy na miaha-mahantra”. Ny “fiainana” izay resahana eto anefa dia tsy ilay fiainana izay mahazatra antsika andavanandro fa ny “fiainana ao amin’i Kristy”. Izany hoe, ny fiainana izay mifanohitra amin’ny fahafatesana na ny fisarahana amin’Andriamanitra mandrakizay izany, ny fiainana izay Andriamanitra no loharanony, ny fiainana ao amin’izay anjakan’Andriamanitra. Ara-tantara, taorian’ny fahalavoana dia tsy fantatry ny olona intsony na tsy niainany intsony izany fiainana izany (Gen 3:19b) fa izay fantany ho fiainana kosa dia ny fiainana vokatry ny hatsembohan’ ny tavany (Gen 3:19a). Izany hoe, ny loharanon’izany fiainana hany fantany izany dia izay antsoin’ny texte anjarantsika eto hoe “Mamona” na “ny haren’ny tany” (Mat 6:24). Izany no nianteherany tanteraka, vokatr’izany dia izay hahazoana izany be dia be no nikelezany aina sy niantonan’izay nataony rehetra teo amin’ny fiainany. Lasa Andriamanitra na sampy notompoina mihitsy aza izany: nampanao azy ny fomba rehetra, eny hatramin’ny faran’izay ratsy indrindra aza mba hahazoana azy. Amin’ny Malagasy dia hamarininy amin’ny fomba fiteniny hoe: “ny vola no maha rangahy”, “ny vola no hozatry ny fiainana” sns. izany. Rehefa naka fanahy an’i Jesosy ny Devoly dia “izao tontolo izao sy ny hareny” no nanambazany Azy (Mat 4:8). Izany hoe, azo lazaina ihany koa fa ny fiainan’ny olona amin’ny maha vahoaky ny fanjakan’ny Devoly azy ity fiainana izay fantany ivelan’ny fiainana ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra ity.
Ny hamerina ny olona hiaina indray izany fiainan’ny Fanjakan’ Andriamanitra izany no nahatongavan’i Jesosy sy votoatin’ny fampianarany/toriteniny rehetra. Izany indrindra no kendreny amin’ny mpihaino azy amin’ny alalan’izao texte izao: tsy ny fiainana entin’ny haren’ny tany no tena fiainana satria fiainana ho faranan’ny fahafatesana ihany izany, fiainana mametraka izay mitoky aminy ho andevon’ny harena izany, eny ho andevon’ny Satana aza. Ny tena fiainana kosa dia ny fiainana izay entin’i Jesosy ao amin’ny Fanjakany: fiainana mahasambatra mandrakizay izany. Izany indrindra àry no iantsoan’i Jesosy ny mpihaino Azy hoe “katsaho aloha ny fanjakan’Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany”. Ny hoe “izany rehetra izany” eto dia tsy milaza ny fanobahan’ny Ray amintsika ny fitahian’ny tany ihany fa ny fanomezany izany fiainana izay tsy hain’ny fahafatesana faranana izany ao amin’ny Fanjakany maharitra mandrakizay ao amin’i Jesosy indrindra koa.
Tsara ho marihina, raha miresaka manokana momba ny fanobahan’ny Ray ny haren’ny tany amin’ny olon’ny Fanjakany Jesosy dia tiany ampahafantarina aminy ihany koa fa Izy no loharanon’izany fa tsy ny herin’ny tenany na ny Devoly sns. sanatria. Manaraka izany, tsy harena hanandevo azy izany fa harena hanompo azy araka ny tenin’Andriamanitra taminy ao amin’ny Gen 1:28–29. Tsy midika koa izany fa harotsak’Andriamanitra tahaka ny mana tany an’efitra amin’ny olon’ny Fanjakany izany. Ampiasain’i Matio ny voambolana hoe “fahamarinana” ao amin’ity Filazantsara ity ilazana ny rariny sy hitsiny iainan’ny olona vokatry ny fandraisany izany Fanjakan’Andriamanitra izany. Izany hoe, ny olon’ny Fanjakany dia hiasa ao anatiny sy amin’ny alalan’izany fahamarinana (rariny sy hisiny) izany ary amin’ny alalan’izany koa no hitahian’Andriamanitra azy. Ny “fahamarinan’ny Fanjakan’Andriamanitra” koa dia hametraka azy tsy ho mpanjakazaka amin’ny voahary sy ny tontolo manodidina izay nomen’Andriamanitra azy fa ho “mpiaro sy mpikarakara ary mpanasoa” (cf. Gen 2:15) izany ary amin’ny alalan’izany no hanobahan’ Andriamanitra ny fitahiany aminy. Raha ny tena marina dia efa omen’Andriamanitra antsika ao amin’ireo voahary samihafa ny zavatra rehetra, ny fikarakarana, ny fanasoavana ary ny fitantanana izany amim-pahamarinana no hisitrahantsika ny tombotsoa avy amin’izany.
Ry Havana “tsy ny fiainana no lafo fa ny mpanjifa ny fiainana no vitsy na miaha- mahantra”. Te-hiaina amin’izany fiainana izany ve ianao? “Katsaho ary aloha ny Fanjakan’Andriamanitra sy ny fahamarinany dia homen’Andriamanitra anao amin’ny fahafenoany izany”.
Voninahitra anie ho an’Ilay tompon’ny harena rehetra. Amena!
« MOA FANTATRAO VA IZAY VAKINAO? » (Asa 8:30) SAROPADY AMIN'NY FIANGONANA LOTERANA NY TENIN'ANDRIAMANITRA Isan'ny antony mahatonga ny polipitra fitoriana Teny ho amin'ny ...Hanohy hamaky
Tari-dalana Toriteny Alahady 04 Septambra 2016 (Alahady faha-15 manaraka ny Alahadin'ny Trinité)
Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Indro atolotra anareo indray ny tari-dalana tsotsotra moba ny texte izay hotoriana manerana ny ...Hanohy hamaky
Tari-dalana Toriteny Alakamisy 24 Martsa 2016 (Alakamisy Masina)
NY FANASAN'NY TOMPO Andro anankiray manana ny mahaizy azy manokana ao anatin'ny Herinandro Masina ny Alakamisy Masina. Ny Fanasan'ny Tompo avy hatrany no ...Hanohy hamaky
NY FAHOTAN’NY ZANAK’ISRAELY NO NAHATONGA NY FAHATEZERAN’ANDRIAMANITRA
Fampianarana Soratra Masina: NY FAHOTAN’NY ZANAK’ISRAELY NO NAHATONGA NY FAHATEZERAN’ANDRIAMANITRA (Azonao henoina ery ambany koa ny fandraisam-peo) Teny fanorenana “Raha mbola tsy mihaino Ahy amin'izany ...Hanohy hamaky
Fianarana Soratra Masina
“Ny Fanahy Masina no mampianatra ahy fa tsy mila boky na mpampianatra hafa!” Misy fiangonana manana io fisainana io, fa tsy ilaina intsony ...Hanohy hamaky
Tari-dalana Toriteny Alahady 09 Aprily 2017 (Alahadin'ny SAMPANDROFIA)
Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Indro atolotra anareo indray ny tari-dalana momba ny perikopa izay ho toriana manerana ny Sahan'ny FLM ...Hanohy hamaky